Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Goobaha fasaxa ee Maraykanka intooda badan iyo kuwa ugu qaalisan
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • kariska • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Iyada oo xayiraadaha safarka ay wali si xowli ah u socdaan, dad badan oo Mareykan ah ayaa door bidaya in ay fasax u dhowaadaan guriga.
Daraasadu waxay eegtay magaalooyinka waaweyn ee Maraykanka si loo ogaado meelaha safarka ugu badan oo ugu jaban.
Oklahoma City waa meesha ugu jaban ee la jabin karo ee jebinta magaalada Mareykanka.
Magaalada New York waa meesha ugu qaalisan ee fasaxa Mareykanka.
Iyada oo xannibaadaha safarka ay la micno tahay in dad badan oo Mareykan ah ay door bidayaan fasax u dhow guriga, khubarada safarka ayaa shaaca ka qaaday meelaha fasaxa Mareykanka ee ugu jaban oo ugu qaalisan si ay u dhiirrigeliyaan safarkaaga xiga!
Daraasadda ayaa lagu eegay magaalooyinka ugu waaweyn dalka si loo ogaado kuwa ugu jaban, iyadoo lagu saleeyay arrimo ay ka mid yihiin cuntada iyo cabitaanka, qiimaha hoteelka iyo gaadiidka.
10ka meelood ee ugu qiimaha badan meelaha la awoodi karo ee Maraykanka
Rank dareenka Beer Khamrigu Cuntada makhaayadda Taxi (1km qiimaha) Hal tigidh oo gaadiidka deegaanka ah Qiimaha huteelka habeenkii (dhammaadka todobaadka) Dhibcaha la awoodi karo ee fasaxa /10
Daraasadu waxay ogaatay in Oklahoma City ay tahay meesha ugu jaban ee la tagi karo US magaalada jaba. Magaaladu waxay ahayd tan ugu raqiisan badh ka mid ah qodobbada la falanqeeyay, waxay ku kacday kaliya $ 3 biir ah, $ 11.50 cuntada makhaayadda, iyo $ 106 habeen huteel! Haddii aad xiisaynayso Old West, markaa Oklahoma City waa booqasho-khasab ah, halkaas oo aad ku booqan karto Matxafka Qaranka ee Cowboy & Western Heritage Museum, gacantaada ku tijaabi xariga iyo xoolo raacidda iyo fardo fuulka rodeo!
Indianapolis waa magaalo kale oo aad loo awoodi karo in la booqdo, iyada oo ku jirta kaalinta labaad. Gaadiidku gaar ahaan waa raqiis, tigidh hal mar ah oo lagu raaco gaadiidka maxalliga ah wuxuu ku kacayaa $ 1.75 oo kaliya, iyo taksi 1km ah oo celcelis ahaan ah $ 1.24. Waxaa ku xigay Tuscon, doorasho caan ah oo loogu talagalay kuwa doonaya inay booqdaan Beerta Qaranka Saguaro iyo mid ka mid ah magaalooyinka ugu raqiisan inay soo booqdaan!
Top 5 meelaha ugu qaalisan ee Mareykanka
1 Magaalada New York, New York $ 7.81 $ 15.00 $ 20.00 $ 1.86 $ 2.75 $ 309 2.56
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah meelaha loo dalxiis tago ee ugu caansan, ma aha oo kaliya Mareykanka laakiin adduunka, lama yaabin in la arko taas New York City sidoo kale waa meesha ugu qaalisan ee fasaxyada Mareykanka, halka deriska Brooklyn uu ku jiro kaalinta 4aad. NYC waxay ahayd magaalada ugu qaalisan afar ka mid ah lixda mitir ee la fiiriyey: biir ($ 7.81), dhalada khamriga ($ 15), cuntada maqaayadda ($ 20), iyo joogitaanka hoteelka ($ 309 habeenkiiba).
Magaalo kale oo aad loo jecel yahay ayaa ku jirta kaalinta labaad, iyadoo San Francisco u dhiganta New York marka ay timaaddo qiimayaasha qaarkood oo aan aad uga dambayn inta badan. Ka sokow inay noqoto meel aad loo jecel yahay oo ay ugu wacan tahay astaamihiisa iyo qaab dhismeedkeeda, magaaladu sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu dakhliga badan Mareykanka, oo sidoo kale kor u qaada qiimaha dadka soo booqda.